လူကြီးများ ချော်လဲခြင်း နဲ့ ကာကွယ်မှုနည်းလမ်းများ | Ensure
လူကြီးများ ချော်လဲခြင်း နဲ့ ကာကွယ်မှုနည်းလမ်းများ
ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာ တစ်ကြိမ် နှစ်ကြိမ် ချော်လဲခြင်းဟာ ခဏတာ နာကျဉ်မှုခံစားရခြင်းကလွဲလို့ အခြားဘာမှမရှိပါဘူး။ ဘာရှုပ်ထွေးမှုများမရှိဘဲ ပျောက်ကင်းသွားမှာပါပဲ။ လူကြီးတွေမှာဆိုရင်တော့ မတူတော့ပါဘူး၊ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အဖက်ဖက်မှာ အားနည်းလာတဲ့အရွယ်မှာ တစ်ခါလဲကျပြီဆိုရင် နောက်တစ်ခါလဲကျနိုင်ခြေ နှစ်ဆတိုးလာပါတယ်။ လူကြီးတွေကို ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်နေသူတွေအနေနဲ့ ဘာကြောင့် သူတို့တွေ လဲကျသလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရင်းဇစ်မြစ်ကိုရှာပြီးတော့ နောက်တစ်ခါမဖြစ်ဖို့အတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့လိုပါတယ်။ အစားအသောက်နဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲကာ ကြွက်သားအားဖြည့်ပေးတဲ့ အရည်အသွေးမြင့် ပရိုတင်းများ နဲ့ ခုခံအား အထောက်အပံ့ပေးတဲ့ အာဟာရ (၁၂) မျိုး^ ပါဝင်တဲ့ ဖြည့်စွက်စာများ (ဥပမာ – Ensure Gold၊ Ensure Gold အပင်ခြေခံပရိုတင်း) သုံးစွဲပြီး မိမိချစ်ခင်ရတဲ့လူကြီးများ လဲကျခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
နာတာရှည်ရောဂါများက ခန္ဓာကိုယ် Balance ထိန်းနိုင်ခြင်းအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်
ဆိုလိုရင်း – လူကြီးတွေမှာ ဆီးချိုသွေးချို၊ လေးဘက်နာ၊ အရိုးပွခြင်း နဲ့ မျက်စိမှုန်ခြင်း တို့လိုမျိုး ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အခြေအနေတွေ အနည်းဆုံးတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ ဒါတွေက ခြေလက်အားနည်းခြင်း၊ ဆုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းနည်းခြင်း၊ မတ်တပ်ရပ်တဲ့အခါ မလဲအောင် ထိန်းနိုင်ခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ အာရုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အားနည်းခြင်းတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။1, 2, 3, 4
ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ – မိမိ ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ လူကြီးတွေမှာ မကြာသေးခင်က ထိခိုက်မှုဖြစ်ထားတာမျိုး ရှိထားလားဆိုတာကို သတိပြုပါ။ ထိခိုက်နိုင်ချေ ရှိလာနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းများကိုလည်းဖယ်ထားပါ။ ဆရာဝန်များနဲ့ ပုံမှန်ဆွေးနွေးမှုများလုပ်ပြီး သုံးစွဲနေတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုလည်း အမြဲသတိပြုပါ။ သူတို့ရဲ့ အာဟာရရရှိမှုကို ထဲထဲဝင်ဝင်လေ့လာပါ၊ ကြွက်သားအားဖြည့်ပေးတဲ့ ပရိုတင်းများများပါဝင်တဲ့ အသား ဒါမှမဟုတ် အသီးအရွက်များ ၊ခီနွာ (QUINOA) ၊ ဆန်၊ ပဲပိစပ် တို့ကျွေးပါ။ ချဉ်သောအသီးများ ၊မှို နဲ့ အသားတွေကနေ အရိုးသန်မာစေဖို့နဲ့ ကယ်လ်စီယမ် စုပ်ယူနိုင်မှုကောင်းဖို့ အားပေးတဲ့ ဗီတာမင် D ကိုလည်း ရနိုင်ပါတယ်။ 1, 2, 3, 4
နေ့စဉ်လုပ်နေကျ အရာတွေကလည်း ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်
ဆိုလိုရင်း – တစ်ခါတလေမှာ လူကြီးတွေထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက ရှိရင်းစွဲ ကျန်းမာရေးအခြေအနေများကြောင့် မဟုတ်ဘဲ နေ့စဉ်လုပ်နေကျ ဘာမှမဟုတ်တဲ့ အသေးအဖွဲလေးတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ နေ့စဉ်လုပ်နေကျ အမူအကျင့်တွေဆိုတာ အသက်အရွယ်ရလာရင် ပြောင်းလဲသွားတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူ။ ၊လူကြီးတွေ အိမ်အနီးအနားက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို စက်ဘီးစီးထွက်တာ၊ ပန်းပင်ရေလောင်းတာတွေကို အမြဲလိုလိုတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ သဘာဝအလျှောက် ကြွက်သားအားနည်းလာတဲ့ (Sarcopenia) အတွက် နည်းနည်းလေးခြေချော်သွားတာမျိုး၊ နိုင်မယ်ထင်လို့ တစ်ခုခုကိုကိုင်လိုက်တာ မ လိုက်တာမျိုးကနေ အရိုးကျိုးတာတွေဖြစ်လာနိုင်ပြီး ပြန်ကောင်းဖို့လည်း အချိန်ကြာနိုင်ပါတယ်။1, 2, 3, 4
ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ – လူကြီးတွေရဲ့ အမြင်အာရုံကိုစစ်ဆေးပေးပါ၊ ဖိနပ်ကောင်းကောင်း စီးစေပါ၊ အားရှိဖို့ နဲ့ balance ထိန်းနိုင်ဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်စေပါ၊ အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကို လူကြီးတွေမထိခိုက်အောင် ထားပါ၊ ဖြစ်နိုင်ရင် သူတို့ကိုအဖော်ပြုပေးပါ။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများနဲ့ တိုင်ပင်ပြီးတော့ လူကြီးတွေလှုပ်ရှားဖို့ အကူအညီဖြစ်စေမယ့် စက်များ၊ ပစ္စည်းများထားထားပါ။1, 2, 3, 4
ပရိုတင်းဓာတ်ချို့တဲ့ခြင်းက အရိုးနဲ့ ကြွက်သားတွေကိုအားနည်းစေပါတယ်
ဆိုလိုရင်း – အရသာခံနိုင်စွမ်းလျော့လာတာ၊ ဝါးဖို့၊ အစာချေဖျက်ဖို့ခက်လာတာတွေကြောင့် လူကြီးတွေရဲ့ အစာစားချင်စိတ်က နည်းလာတတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အသည်းအဆီဖုံးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်စွာမစားခြင်း ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ နဲ့ အခြားအမူအကျင့်တွေကြောင့် ပရိုတင်းနဲ့ လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ ချို့တဲ့လာစေပါတယ်။ လူကြီးတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ပရိုတင်းကို သိုလှောင်ဖို့ နဲ့ အသုံးပြုနိုင်စွမ်းနည်းလာတဲ့အခါမှာ လွယ်လွယ်နဲ့ ပရိုတင်းချို့တဲ့လာနိုင်ပါတယ်။ ပရိုတင်း ဟာ Antibody ပဋိ ဇီဝပစ္စည်းတွေ အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်နဲ့ အောက်ဆီဂျင်လည်ပတ်ခြင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတာကြောင့် ပရိုတင်းချို့တဲ့မှုဟာ လူကြီးတွေရဲ့ ခုခံအားကို ထိခိုက်စေမှာ အသေအချာပါပဲ။5
ဘာတွေစားရမလဲ – အသက် (၅၅) နဲ့အထက်ရှိသူတွေအတွက် နေ့စဉ်ပရိုတင်း စားသုံးသင့်တဲ့ ပမာဏကတော့ ကိုယ်အလေးချိန် (၁) ကီလိုကို ပရိုတင်း (ဝ.၈) ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအရွယ်လူကြီးတွေက ပရိုတင်း အသုံးပြုနိုင်မှု အားနည်းလာတာကို ကြိုတွေးထားဖို့လိုပါတယ်။ တချို့လူကြီးတွေအနေနဲ့ ဒီပမာဏထက် (၂)ဆ လောက် စားသင့်တာမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ ပရိုတင်းပိုရရှိအောင်စားသုံးခြင်းက ကျန်းမာစွာစားသုံးခြင်းရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲရှိပါသေးတယ်5 ။ ကြွက်သားတည်ဆောက်ခြင်းအတွက် အရေးပါတဲ့ နောက်ထပ် အာဟာရတစ်မျိုးကတော့ Hydroxymethylbutyrate (HMB) ဖြစ်ပါတယ် (အမိုင်နိုအက်ဆစ် လူစင်းကိုချေဖျက်ရာမှဖြစ်ပေါ်လာသောဓာတ်)။ HMB ကို အရည်အသွေးမြင့်ပရိုတင်းတွေပါဝင်တဲ့ အဆီနည်းသောအသား ၊ငါး ၊ပဲပိစပ်၊ ဆန် နဲ့ ခီနွာ (QUINOA) တို့ကနေ ရနိုင်ပါတယ်။ ဘာတွေစားရမလဲဆိုတာကို သေချာမသိဘူးဆိုရင် Healthy Plate Principle အတိုင်း စားနိုင်ပါတယ်။ ပန်းကန်တစ်ချပ်မှာ သစ်သီး နဲ့ အသီးအရွယ် (၂) ပုံ (၁) ပုံ၊ အစေ့အဆန် (၄) ပုံ (၁) ပုံ၊ ပရိုတင်း (၄) ပုံ (၁) ပုံ နဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်း (သို့) နို့ထွက်ပစ္စည်းအစားထိုး တစ်ခွက် တို့ကို စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်ကြောင့် အရသာခံနိုင်စွမ်း နဲ့ အစာစားချင်စိတ် လျော့လာတတ်တာကြောင့် လူကြီးတွေအနေနဲ့ လိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေရနိုင်ဖို့ အများကြီးမစားနိုင်တာမျိုး ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ HMB လိုမျိုး အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေဟာလည်း အစားအစာမှ လုံလောက်စွာ ရဖို့ခက်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ကန့်သတ်ချက်တွေ ရှိနေတဲ့အတွက် လူကြီးတွေအနေနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ဆရာဝန်များ ထောက်ခံမှုအများဆုံး နံပါတ် (၁)** ဖြစ်တဲ့ Ensure ကို အစာနဲ့တွဲပြီးဖြစ်စေ အစာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အစားထိုးပြီးဖြစ်စေ သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ HMB နဲ့ Triple Protein Blend တို့ပါဝင်ပြီး သိပ္ပံနည်းကျ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Ensure မှာ ကိုယ်ခံအားတိုးတက်စေနိုင်တဲ့ ဗီတာမင် နဲ့ သတ္တုဓာတ် (၁၂) မျိုး^အပါအဝင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ် (၂၈) မျိုး ပါဝင်ပါတယ် Ensure Gold ကခွန်အားတွေတိုးလာဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ပဲပိစပ်၊ ဆန်၊ ခီနွာ (QUINOA) တို့ကနေ ထုတ်ထားတဲ့ Ensure Gold အပင်အခြေခံပရိုတင်း ကလည်း နို့မသောက်သူတွေ ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ option တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။6
လူကြီးများ ချော်လဲခြင်းနဲ့ ထိခိုက်မှုများဖြစ်ပေါ်ရာမှာ အကြောင်းအရာတွေ အများကြီးပါဝင်နေပြီး ဒီအကြောင်းအရင်းတွေကို သိရှိထားပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ထားမယ်ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ချေကို အများကြီးလျှော့ချနိုင်မှာပါ။ ကာကွယ်ခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးကုသခြင်းဖြစ်သလို လူကြီးများကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ နဲ့ အာဟာရမျှတစွာရရှိစေဖို့လည်း ဂရုစိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခြားအချက်အလက်များကို သိနိုင်ဖို့နဲ့ နမူနာများရရှိနိုင်ဖို့ Ensure Myanmar ကို ဒီနေ့ပဲဝင်ကြည့်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။
prednisolone 10mg us – prednisolone 20mg usa order generic tadalafil 40mg
order sildenafil 50mg without prescription – buy ivermectin tablets ivermectin pills
generic ceftin 250mg – cefuroxime 250mg usa cialis 20mg oral
ampicillin over the counter – ampicillin 500mg oral cialis 20 mg price
Fantastic blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I’m planning to start my own blog soon but I’malittle lost on everything. Would you recommend starting withafree platform like WordPress or go forapaid option? There are so many options out there that I’m completely confused .. Any suggestions? Thanks!
ivermectin 400 mg brands – ivermectin for sale vardenafil 20mg usa
lisinopril pills – order lopressor 100mg generic tenormin 50mg uk